यस कारण अब नेप्से उकालो लाग्न सक्छ - Aarthiknews
यस कारण अब नेप्से उकालो लाग्न सक्छ
जेठ १५ गते सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट शेयर बजार अनुकुल आएको छ । त्यसैको आधामा नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी वर्षका लागि यही महिनाको अन्त्यमा ल्याउने मौद्रिक नीति अनुकूल आयने अपेक्षा लगानीकर्ताले गर्न थालेका छन्् । त्यसले पनि शेयर बजार उकालो लाग्न पुग्ने अनुमान गरिएको हो ।
बजेटपछि बजारमा सुधार हुन नसके पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले ल्याएको बजेटलाई शेयर बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले सकारात्मक रुपमा लिएका थिए । शेयर बजारप्रति अनुदार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा पछिल्लो समय उदार भएजस्तै गभर्नर डा. चिरन्जीवी नेपाल पनि शेयर बजारप्रति उदार हुने आँकलन गरिएको छ ।
बजेटमा पुँजी बजारलाई प्रोत्साहन मिल्ने खालका कार्यक्रम आए शेयर बजार अझै उकालो लाग्न सक्ने सम्भावना छ । शेयर बजारलाई असर पार्ने खालको नीति नल्याउँदा मात्र पनि शेयर बजार बढन्े निश्चित छ । अर्थमन्त्रीले गभर्नर नेपाललाई आफ्नो धुमलिएको छवी सपार्न पनि शेयर बजारमैत्री नीति ल्याउन निर्देशन दिएकाले पनि बजार सुधार हुने कुरामा दुविधा छैन ।